Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Wax ku oolka ah ee B2B | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Wax-ku-oolka Wax-soo-saarka B2B ee ugu Wax-ku-oolsan
Khamiista, Noofembar 6, 2014 Arbacada, Nofeembar 5, 2014 Douglas Karr
Waan wadaagnay 2015 B2B Mawduucyada Suuqgeynta Mawduucyada, Miisaaniyadda iyo Isbeddellada iyo sidoo kale xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ugu caansan oo ay adeegsadaan suuqleyda B2B. Laakiin maxay yihiin xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha ugu wax ku oolka badan ee B2B?
Sida lagu sheegay daraasadda, sirta guusha suuqgeynta waxyaabaha waa in la diiwaangeliyo istiraatiijiyaddaada oo aad ku dheganaato. Waxa kale oo ay daahfurtay in suuqleyda waxyaabaha ka kooban ay abuurayaan waxyaabo badan oo aad u badan laakiin waxay weli ku dhibtoonayaan inay la socdaan ROI, gaar ahaan marka aysan diiwaangelin istiraatiijiyadooda. Waad awoodaa akhri warbixinta oo dhan dhammaan natiijooyinka faahfaahsan. Francois Matheiu, Uberflip
Qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee aan ku raacsanahay oo aan la aragno macaamiisheenna:
Infographic isticmaalka si weyn ayaa loo kordhiyay. DK New Media wuxuu leeyahay daraasiin la daabacay dhowrna hoos ayuu u socda macaamiishayada.
Dhacdooyinka qofka yihiin kuwo si wax ku ool ah waxtar u leh, oo ay ku xiran yihiin websaydhyo iyo fiidiyowyo.
LinkedIn ayaa weli ah isha ugu wax ku oolka badan ee isticmaalka warbaahinta bulshada.
Abuuritaanka, soo saarista iyo cabbiraadda wax ku oolnimada suuqgeynta waxyaabaha ayaa sii ahaanaya caqabadaha ugu sarreeya.
Tags: baloogyada b2bdaraasad kiis b2bb2b macluumaadka infographicsuuq geynta b2bdhacdooyinka b2bb2b infographicfiidiyowyada suuq geynta b2bb2b warbaahinta bulshadafiidiyowyada b2bshabakada b2bshabakadaha b2bContent Suuquberflip
Ku hel Mawduucaaga Mid Degdeg ah oo leh Tilmaamahan Maareynta Sawirka
Nov 7, 2014 at 10: 03 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadka Uberflip, had iyo jeer waa wax lagu farxo in lagu soo bandhigo TechBlog Marketing!